Andro: 11 mey 2020
2020 Ny vidin'ny Fividianana Tea Tea dia nambara
Ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia nanambara ireo fanapahan-kevitra vaovao noraisina tamin'ny ady atao amin'ny coronavirus taorian'ny Fivorian'ny Kabinetra. Niresaka momba ny fividianana ny dite ihany koa ny filoha Erdoğan ary nanao izao fanambarana manaraka izao: Hoy i Erdogan, “Tamin'ny 2020 [More ...]
Izay afaka mandeha eny an-dalambe ao anatin'ny fe-potoana voafetra mihoatra ny 65 sy 20 taona
Nanao fanambaràna ny filoha Recep Tayyip Erdoğan taorian'ny fivorian'ny kabinetra. Raha ny voalaza dia, afaka mandeha eny an-dalambe ny olona mihoatra ny 65 taona ny alahady 17 mey 2020 eo anelanelan'ny 11.00-17.00. Latsaky ny 20 [More ...]
Fandehanana fitsangatsanganana nafahana amin'ny tanàna 9
Travel ban ho any amin'ny tanàna 9 nesorina: Ny filoha Erdogan, izay nanao fanambaràna mikasika ilay resaka tonga amin'ny fandaharana taorian'ny fotoam-pivoriana tao amin'ny Kabinetra, dia nanambara fa nesorina ny fanalana ny dia ho an'ny tanàna. Ireto ny faritany nanalana ny fanetezana fitsangatsanganana. [More ...]
Minitra farany: Voafetra ny curfew ao anatin'ny 4 andro sy ny fepetra vaovao
Nanao fanambarana lehibe ny filoha Recep Tayyip Erdoğan taorian'ny Kabinetran'ny filoha. "Hampiharina indray ny curfew amin'ny 16-17-18-19", hoy i Erdogan. Nandritra ny fihaonana izay nanambaran'i Erdogan ny fanapahan-keviny isan-kerinandro tamin'ny adiresiny tamin'ny Firenena, [More ...]
COVID-2020 Fiarovana amin'ny fialan-tsasatry ny fahavaratra amin'ny 19
Noho ny fahatongavan'ny vanim-potoana fahavaratra taorian'ny nipoahan'ny Torkia Covidien-19 izay nisy asa ilaina ho fanarenana ny sehatry ny fizahantany. An-jatony ny sangan'asa ireo dia hihena ny antsasaky ny trano fandraisam-bahiny amin'ireo toerana hitsidika. Sora lakana eny amin'ny tora-pasika [More ...]
Mametaka ny vidin'ny volo sy ny taovolo Coronavirus
Tao anatin'ny faritry ny fepetra natao tamin'ny coronavirus, barbero sy mpanolo-bolo, izay naato ny 21 martsa dia nanomboka niasa toy io maraina io. Ny mpanjifa izay niaraka tamin'ny fanokafana ny barbert dia nanamboatra ny volon'izy ireo teo ambanin'ny fitsipika fidiovana. 40 FIVORIANA MASINA Fa ny serivisy [More ...]
Indostrian'ny lalamby sy rafi-pitantanana kalitao
Raha ny indostrian'ny gara dia raisina ho jerena amin'ny lafiny kalitao dia afaka mametraka fenitra sy rafi-pitantanana maro izy io. Ny sakan'ny fangatahana dia manana rindranasa maro ao amin'ny orinasa matotra iray toy izany. ISO 9001: 2015 Fitantanana ny kalitao amin'ny lalamby [More ...]
Ahoana no fiantraikan'i Coronavirus amin'ny vehivavy bevohoka
Ireo manam-pahaizana milaza fa ny fitaintain'izy ireo dia mety hitombo miaraka amin'ny fiovan'ny fiovan'ny hormonina niainan'ny vehivavy bevohoka tamin'ny fizotran'ny valan'aretina izay manamarina fa tokony hihazona mafy hatrany ny rafitra fiarovana. Ireo manam-pahaizana dia nanolo-tena tamin'ny reny nanao fanatanjahan-tena sy tsy tapaka [More ...]
Iza moa i Şakir Zümre?
Şakir Zümre, iray amin'ny havana akaiky an'i Marshal Fevzi Çakmak, teraka tao Varna tamin'ny 1885. Nianatra tany Genève izy rehefa nahavita ny fianarany voalohany. Nianatra lalàna teto izy. Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nanao fizahana tao amin'ny Başakşehir İkitelli City Hospital connection conseil. Karaismailoğlu, ny fiarabe ambulance izay hatao amin'ny fidirana amin'ny sampana vonjy maika ny hopitaly sy ny fanamboarana ny làlana mankany amin'ny fidirana andrefana. [More ...]
Famolavolana ny fangatahana famonoana olona voafatotra tokana amin'ny raharaha lozam-pifamoivoizana Ankara YHT
Ny lalamby haingam-pandeha, izay nanao ny diabe Ankara-Konya tamin'ny 13 desambra 2018 tany Ankara, nifandona tamina fiaran-dalamby nandritra ny nidirany tao amin'ny gara Marşandiz. Tao anatin ny loza nitranga dia olona 9 no maty ary ny iray tamin'izy ireo no nigadra [More ...]
Adana lamasinina na Adana Train Station no fiaran-dalamby lehibe amin'ny TCDD izay misy ao amin'ny distrikan'i Seyhan ao Adana. Natao tamin'ny 1912 ny serivisy. Androany izao dia fonenan'ny Tale foibe faha-6 an'ny TCDD [More ...]
Ny volavolan-dalamby fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka vaovao, izay miaraka amin'ireo tetikasa izay nohamafisin'ny Trabzon Metropolitan Mayor Murat Zorluoğlu, dia nokasaina hanomboka amin'ny faran'ny volana Mey. Ny vaovao izay hameno ny tsy fahampiana lehibe ao amin'ny tanàna [More ...]
Manohy ny fiezahana hanomezana fitaterana azo antoka sy milamina ary madio amin'ny mponin'ny Eskişehir, ny Eskişehir Metropolitan Munich dia nanatanteraka ny fanaovany ny fanadiovana ara-dalàna hatrany amin'ny làlana faran'ny herinandro ity. Fivoahana Corona [More ...]
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia mandoko ny ambanin'ny mpandeha an-tongotra, ny tetezana ary ny rindrina tsy misy rindrina any an-drenivohitra miaraka amin'ireo mazoto amin'ireo mpanao hosodoko. Tamin'ny tetikasa natolotry ny Ben'ny tanàna Metropolitan Mansur Yavaş, mpanao hoso-doko avy any an-drenivohitra, [More ...]
Konya Metropolitan Munisipaly dia mifindra amina rafitra vaovao amin'ny fizotran'ny fanafoanana ny otrikaretina ao anatin'ny faritry ny ady amin'ny karazana coronavirus (Kovid-19) amin'ny fiaraha-miasa amin'ny University of KTO Karatay. ohatra Torkia, izay dia ny hiarovana ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny ady atao Koronavirüsl [More ...]
Niverina tany amin'ny tranokala i Bursa Streets
Ao amin'ny curfews ampiharina amin'ny faran'ny faran'ny herinandro amin'ny herin'ny ady amin'ny otrikaretina corona, ny munisipaly Metropolitan, izay manohy ny fanavaozana ny asphalt ao amin'ny arteri-n'i Bursa, amin'ny lafiny iray, koa, dia manolo ny serivisy andrasana ao amin'ny faritra manodidina mandritra ny taona maro. [More ...]
Ora maro amin'ny sidina lamasinina no mihitatra any Istanbul!
Ny munisipaly Metropolitan Istanbul (IMM) dia nanambara ny alatsinainy fa hisy tari-dalana vaovao hapetraka eo amin'ny lalan'ny gara aorian'ny làlana mankany amin'ny làlana. Ny tsipika metro sy tram-paritra voafaritra dia manomboka amin'ny 06:00 - 23:00. Efa za-draharaha amin'ny isan'ny mpandeha [More ...]
Mitombo ny sidina Akçaray mandritra ny dingana fanavaozana
TransportationPark, iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny kaominin'i Kocaeli Metropolitan, dia nanambara fa i Akçaray dia hikarakara sidina 11 minitra amin'ny fotoana fara tampony amin'ny alatsinainy 2020 Mey 6, mandritra ny fifandimbiasana amin'ny dingan'ny fanavaozana ara-dalàna. Akçaray dia hanao dia mandritra ny vanim-potoana 7 samihafa, andro [More ...]
Krizy Coronavirus ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul! Isan'ny mpandeha nihena tamin'ny 99,3 Persato
Ny famerana amin'ny fivezivezena dia napetraka manerana izao tontolo izao noho ny fihanaky ny valan'aretina corona. Noho izany, dia nihena ny isan'ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. Ny National Airports Authority (DHMI) dia namoaka ny antontan'isa fiaramanidina nataony tamin'ny Aprily. [More ...]
Ny Sakarya Nostalgic Tram dia Bid Indray
Niresaka tamin'ny fandaharan'asa 'Head to Head with the President' nokarakarain'ny Oniversite Sakarya, ny Ben'ny tanàna Metropolitan Ekrem Yüce dia niresaka momba ny tetikasa Nostalgic Tram, izay nahemotra noho ny coronavirus. [More ...]
Iza moa i Tomris Uyar?
Tomris Uyar, izay maty tamin'ny faha-17 taonany vao 62 taona lasa izay ary nandao anay, dia tsaroana indray niaraka tamin'ny fikarakarana azy. Ity ny fiainan'i Tomris Uyar ary miasa Tomris Uyar (15 martsa) [More ...]
Ny safidy lehibe indrindra ara-toekarena sy maitso indrindra amin'ny fiara LPG
Taorian'ny areti-mifindra amin'ny coronavirus dia ny fahazarana ara-dalàna novolavolaina hanomboka eto amin'izao tontolo izao sy eto amin'ny firenentsika dia mitondra fahazarana vaovao amin'ny fiaraha-monina. Raha ny lalànan'ny elanelana sy ny fahadiovana dia mijanona ho zava-dehibe amin'ny fanavaozana ara-dalàna, ny fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny faran'ny quantine [More ...]
Tsy mihemotra ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny manam-pahaizana
Taorian'ny fanazavan-kevitra ny fenitra momba ny fanokafana ivotoerana arak'asa miaraka amin'ny fandaharana natao tao amin'ny sehatry ny fiara efa niasa, ny orinasa tomban-tsoa, ​​izay nanafaingana ny fampiasam-bolany dia nanomboka nanao dingana goavana ihany koa ho an'ny andrim-panjakana sy ny fanoratana. Varotra fiantohana fiara [More ...]
Fanohanana vaovao momba ny fambolena momba ny fampandrosoana ny ambanivohitra 1,2 Billion Liras!
Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Bekir Pakdemirli; “Manohy mitondra ny fampandrosoana IP ambanivohitra ho an'ny mpampiasa vola izahay mba hampitomboana ny fampiasam-bola any ambanivohitra, manome vola bebe kokoa ho an'ny mpamokatra ary mandray anjara bebe kokoa amin'ny asa. Ity indray mitoraka ity [More ...]